तपाईलाई कुनै रोग त लागेको छैन ,मात्र एक मिनटमा १ चम्चाको सहायताले पत्ता लगाउनुहोस
प्रकासित मिति : ४ भाद्र २०७५, सोमबार प्रकासित समय : ०९:३८
काठमाडाै।जीवनशैलीमा आएको नाटकीय परिवर्तनसँगै रोगको संक्रमण समेत बढेर गएको छ । शहरी क्षेत्रमा रोग लागे या नलागेको बारेमा रगत र अन्य कुराको परीक्षणबाट पत्ता लगाउन सकिएपनि सबैले त्यसो गर्न सक्ने अवस्था छैन । ग्रामीण क्षेत्रमा त झन परीक्षणको सुविधा नभएका कारण बिमारी छ या छैन थाहा नै नपाई गम्भीर बिमारीको शिकार बन्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
कसरी गर्ने परीक्षण ? चम्चाको भित्र पसेको भागलाई जिब्रोमा राखेर यसलाई बिस्तारै बिस्तारै ¥याल नआउँदासम्म रगडनुस् । चम्चामा राम्रोसँग मुखको ¥याल लागेपछि यसलाई मुखबाट निकालेर एउटा पोलिथिनमा राख्नुस् ।
बिमारी कसरी चिन्ने त ? चम्चा सँघ्नुस, यदि पोलिथिनबाट मीठो वास्ना आयो भने तपाईलाई सुगर या चिनी रोगको सम्भावना हुन सक्छ ।